आजको राशिफल, वि.सं. २०७८ साल असोज १५ गते शुक्रबारGandaki Press
वि.सं. २०७८ साल असोज १५ गते शुक्रबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ अक्टोबर १ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, शरद्ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विनकृष्ण(पितृ) पक्षको दशमी तिथि वेलुका ७:२५ बजेसम्म, त्यसपछि एकादशी रहनेछ ।
मेष : विपक्षीले कमजोरीको फाइदा उठाउने छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर बन्नेछ । स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ । काम गरेर जस नमिल्दा नैराश्यता छाउनेछ । नयाँ कार्य थाल्दा मातृ पक्षको साथले थाल्नु होला ।
वृष : हर्षको खबर मिल्नेछ । साथीभाइसँगको रमाइलो जमघट हुनेछ । जोखिमयुक्त कार्यलाई पनि सरल तरिकाले गर्न सक्दा प्रशंसकहरु बढ्ने छन् । सान्दर्भिक कार्यको आरम्भले गर्दा धेरै व्यक्तिको साथ सहयोग पाइनेछ ।
मिथुन : आर्थिक अवस्था बलियो रहँदा लगानि गर्न सकिनेछ । अचल सम्पत्ति जोड्ने योग बनेको छ । द्वितीयेश चन्द्रमाले सामान्य अन्योलको अवस्था सृजना गर्न सक्छ, कुटुम्बको सहयोगले कार्य गर्दा सफल भइनेछ ।
कर्कट : बोलिको कदर हुनेछ । पढाइमा मन जानेछ । अघिदेखिका समस्यालाई हल गर्न सकिनेछ । विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । देशदेशान्तरसम्म प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ ।
सिंह : सामान्य कार्यमा भुल्दा गर्नै पर्ने महत्वपूर्ण कार्य अन्योलमा पर्नेछ । विश्वास गरेका व्यक्तिले साथ छाड्दा दैनिक कार्यमा समेत समस्या सृजना हुनेछ । खर्चको मात्रा बढेर जानेछ । असन्तोषी प्रबृत्ति रहनेछ ।
कन्या : आम्दानिका स्रोतहरु फेला पर्नेछन् । आर्थिक पक्ष बलियो रहनेछ । सानो लगानिले नै धेरै लाभ मिल्दा काम गर्ने हौसला थपिनेछ । व्यवसायबाट आत्मसन्तोष मिल्नेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा समेत उन्नतिको होला ।
तुला : कर्म क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तन आउनेछ । मायाप्रेमको गाँठो कसिलो बन्नेछ । इमान्दारीताका कदर हुनेछ भने विशेष कार्यको जिम्मेवारी समेत मिल्नेछ । वहान सुख मिल्नेछ । सृजनात्मक कार्यमा मन जानेछ ।
बृश्चिक : आर्थिक पक्षमा सुधार हुँदा, सहज हुनेछ । भाग्यले साथ दिँदा थालेका अधिकांश कार्यले उचित स्थान पाउने छन् । सहनशिलता र कृयाशिलताको बृद्धि विकास हुनेछ । सकारात्मक सोच विचार रहनेछ ।
धनु : प्रतिक्षित नतिजामा गिरावट आउँदा, चिन्ता बढ्नेछ । अष्टमेश चन्द्रमा ग्रहले गर्दा असन्तोषी प्रबृत्ति रहनेछ । आर्थिक आम्दानि भएता पनि सही स्थानमा लगानि गर्न सकिने छैन । आफन्तजनसँग टाढिनु पर्नेछ ।
मकर : हर्षको खबर मिल्नेछ । आत्मकारक ग्रहको पूर्ण दृष्टि परेको छ । अरु दिन विरोध गर्नेहरु पनि समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन् । नोकरीमा प्रशंसा एवं अवसर मिल्नेछ । छोटो रमाइलो यात्राको अवसर मिल्नेछ ।
कुम्भ : श्रमको सही मूल्यांकन मिल्दा काम गर्ने हौसला थपिनेछ । सनातिना समस्या आएता पनि मान्यजनको साथ सहयोगले अघि बढ्दा कार्य बन्नेछन् । व्यवसायबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ ।संयम रहेर कार्य गर्नुहोला ।
मीन : विद्यार्थी वर्गका लागि उन्नतिकारक समय रहेको छ । असहज परिस्थितिको अन्त्य हुनेछ । बौद्धिक क्षमताको बृद्धि विकास हुनेछ । पारिवारिक सहयोगले कार्य बन्नेछन् । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ ।